Astaamaha Nidaam kasta oo Maareyn Mawduuc ah Waa inuu lahaadaa Raadinta Mashiinka Raadinta | Martech Zone
Astaamaha Nidaam kasta oo Maareyn Mawduuc waa inuu lahaadaa Raadinta Mashiinka Raadinta
Jimco, Nofeembar 6, 2020 Jimco, Nofeembar 6, 2020 Douglas Karr
Waxaan la kulmay macmiil la halgamayay qiimeynta mashiinkooda raadinta. Markii aan dib u eegay tooda Nidaamka Maareynta Maareynta (CMS), waxaan raadiyay dhaqammo aasaasi ah oo wanaagsan oo aanan heli karin. Kahor intaanan bixin liistada hubinta si aan uga xaqiijiyo bixiyahaaga CMS, waa inaan marka hore sheegaa in gebi ahaanba aysan jirin sabab ay shirkad MA u yeelato nidaamka maareynta maaddada mar dambe.
CMS waxay ku siin doontaa adiga ama kooxdaada suuq-geynta inaad ka bedesho bartaada duulimaadka adigoon u baahnayn soo saare web. Sababta kale sababta a Nidaamka Maareynta Maareynta waa daruuri inta badan iyaga ayaa otomaatig u ah ku dhaqanka ugu fiican ee wax u hagaajinta bartaada.
Nadiifiyeyaasha SEO ayaa laga yaabaa inay ku doodaan qaar ka mid ah astaamaha aan halkaan kaga wada hadlo maxaa yeelay si toos ah uguma tilaabsan karaan darajaynta. Waxaan kula murmi lahaa wax kasta oo ah Raadinta Qalabka Guru, in kastoo, in darajada mashiinka raadinta ay ku saabsan tahay waayo-aragnimada isticmaale - maahan algorithms-ka mashiinka raadinta. Sida ugu wanaagsan ee aad u naqshadeyso bartaada, u maal gasho waxyaabo aad u wanaagsan, u dhiirrigeliso waxyaabahaas, oo aad ula macaamisho isticmaaleyaashaada… sida ugu wanaagsan ee boggaagu ugu qaban doono qiimeynta raadinta dabiiciga ah.
Farsamada maka sida raadiyaha gurguurashada mashiinka raadinta uu u helo, tusmooyinka, iyo darajadayour bartaada waxbadan iskama badalin sanadihii la soo dhaafay… laakiin awooda soo jiidashada dadka soo booqda, martidaasi ha kula wadaagaan waxyaabahaaga, iyo in mashiinnada raadinta ay ka jawaabaan si muuqata ayaa loo beddelay. SEO wanaagsan ayaa ah waayo-aragnimo user weyn… Iyo nidaamka maareynta maadooyinka ayaa muhiim u ah guushaada.
Maaraynta Mawduucyada SEO
kasta Nidaamka Maareynta Maareynta waa inuu lahaadaa ama lagu hirgeliyaa astaamaha soo socda:
Ka-kabashada: Kaydinta iyo SEO? Waa hagaag… haddii aad lumiso bartaada iyo waxyaabaha ku jira, way adag tahay in la kala saaro. Haysashada kayd adag oo leh keydad koror ah iyo sidoo kale dalab, dib-u-habeyn goobta ka baxsan iyo dib u soo celinta ayaa aad waxtar u leh.
Burcadka: Haddii aad heysato macluumaad badan oo si nidaamsan loo abaabulay, awoodda isticmaaleyaasha (iyo makiinadaha raadinta) inay fahmaan in kala sarraynta ay muhiim u tahay sida ay u arkaan waxyaabahaaga oo ay si sax ah ugu muujiyaan.
Ogeysiinta Browser: Chrome iyo Safari hadda waxay bixiyaan ogeysiisyo isku dhafan oo leh nidaamyada hawlgalka. Marka qof ku soo dego bartaada, waxaa la weydiiyaa haddii ay jeclaan lahaayeen in la ogeysiiyo marka waxyaabaha la cusbooneysiinayo. Ogeysiisyada ayaa ka dhigaya martida inay soo noqdaan!
Caching: Mar kasta oo bog la codsado, raadinta xog ururin ayaa haysa waxa ku jira isla markaana waxay isku daraysaa bogga. Tani waxay qaadataa ilo iyo waqti that wax u dhimaya hagaajinta mashiinkaaga raadinta. Helitaanka CMS ama marti-geliyaha leh awoodda kaydinta ayaa fure u ah xawaareynta boggaaga iyo yareynta ilaha looga baahan yahay server-kaaga. Kaalayntu sidoo kale way kaa caawin kartaa markaad kuhesho duulimaadyo pages bogag xayeysiis ah way fududahay in la bixiyo marka loo eego bogagga aan la daboolin. Marka waxaad heli kartaa booqdayaal badan oo ka badan intaad heli karto adigoon qaflayn.
Cinwaannada URL-ka: Mararka qaar bogagga waxaa lagu daabacayaa iyadoo hal bog leh wadooyin badan. Tusaale fudud ayaa ah in boggaagu leeyahay http://yourdomain.com or http://yourdomain.com/default.aspx. Labadan waddo ee isla bogga ah ayaa kala qaybin kara miisaanka isku-xidhka soo socda ee meesha aanu boggaagu ku jirin u dhigin sida ugu wanaagsan ee ay noqon karto. URL kaniisad ah waa gabal qarsoodi ah oo HTML ah oo u sheegaya makiinadaha raadinta URL ay tahay inay ku dabaqaan cinwaanka.
Comments: Faallooyinka waxay ku darsadaan qiime waxyaabahaaga. Kaliya iska hubi inaad dhexdhexaad ka noqon karto faallooyinka maaddaama ay jiraan tan badan oo bots ah oo halkaas ka jira oo been-abuuraya astaamaha CMS si ay isugu dayaan inay u abuuraan xiriiriyeyaal
Tifatiraha Mawduuca: Tifatiraha maaddada oo u oggolaanaya H1, H2, H3, xoog leh iyo farta in lagu duubo qoraalka. Tafatirka sawirku waa inuu u oggolaadaa walxaha ALT in wax laga beddelo. Tifatirka calaamadaha barroosinka waa inuu u oggolaadaa TITLE curinta walxaha. Waa ayaan darro intee in le’eg oo nidaamyada CMS ah ayaa leh tifaftireyaal liita!
Network Delivery Content: A shabakada bixinta nuxurka waa shabakad kumbuyuutarro ah oo juquraafi ahaan ku yaal oo kaydiya kheyraadka ma guurtada ah ee gudaha… u oggolaanaya bogagga inay si dhakhso leh u soo rartaan. Sidoo kale, marka CDN la hirgeliyo, codsiyadaada bogga waxay ku shubi karaan hantida ka jirta server-kaaga iyo CDN-kaaga isla waqtigaas. Tani waxay yareyneysaa culeyska serverkaaga waxayna kordhisaa xawaaraha bogaggaaga si weyn.
Waxqabadka Heerka Sare: Xawaaruhu waa wax walba marka laga hadlayo matoorada raadinta. Haddii aad isku dayeyso inaad keydiso waxoogaa lacag ah martigelinta, waxaad gabi ahaanba baabi'ineysaa awoodaada inaad kuhesho oo aad sifiican uguhesho matoorada raadinta.
Cadaadiska Sawirka: Sawirada waxaa badanaa loo dhoofiyaa feylal waawayn oo aan loo baahnayn. Ku dhex-dhexaadinta qalab isku-buufinta sawirka si loo yareeyo cabirka faylka loona cabbiro sawirrada muuqaalka ugu fiican waa muhiim.
Isdhexgalka: Awoodda lagu kordhinayo shaqeynta waxa ku jira maareynta jiilka, suuqgeynta iimaylka, otomaatiga suuqgeynta, suuqgeynta warbaahinta bulshada, iyo barnaamijyada kale ee kaa caawinaya inaad hesho iyo haysato taraafikada.
Caajis Loading Sawirro: Mashiinnada raadinta waxay jecel yihiin waxyaabo dheer oo badan oo warbaahin ah. Laakiin soo dejinta sawirradu waxay ka gaabin kartaa boggaaga guurguurashada. Rarridda caajiska ahi waa qaab loo raro sawirrada inta bogga la rogrogayo. Tani waxay u oggolaaneysaa bogga inuu si dhakhso leh u soo rarto, ka dibna muujiyo oo keliya sawirrada marka isticmaalehu gaaro meeshuu joogo.
Maamulka Lead: Ka dib markii rajooyin ay heleen maqaalkaaga, sidee bay kulaula xiriiraan? Haysashada nashqadeeyayaasha foomka iyo xog ururin si ay u soo qabtaan hoggaanku waa waajib.
Sharaxaadda Meta: Mashiinnada raadinta waxay sida caadiga ah qabtaan sharraxaadda meta ee bogga waxayna muujinayaan taas hoosta cinwaanka iyo iskuxirka bogga natiijooyinka mashiinka raadinta. Marka sharraxaadda meta aysan jirin, makiinadaha raadinta ayaa si aan kala sooc lahayn uga soo qaadan kara bogga… ficil hoos u dhigaya qiimahaaga riix-illaa-xiriiriyeyaashaada makiinadaha raadinta oo xitaa dhaawici kara tilmaanta boggaaga. CMS-gaagu waa inuu kuu oggolaadaa inaad wax ka beddesho sharraxaadda meta ee bog kasta oo ka mid ah bogga.
mobile: Raadinta moobiilka ayaa ku qarxaya isticmaalka madaama taleefannada casriga ah iyo kiniiniyada la wada qaatay. Haddii CMS-kaaga uusan oggolaan websaydh wax ku ool ah oo isticmaalaya HTML5 iyo CSS3 (ikhtiyaarka ugu fiican)… ama ugu yaraan dib loogu celiyo qaab moobiil sifiican loo habeeyay, si fudud laguuguma dari doono raadinta moobiilka. Intaa waxaa sii dheer, qaabab cusub oo moobiil ah sida amp ka heli kartaa waxyaabahaaga sifiican loogu qiimeeyay raadinta laga sameeyay aaladaha Google.
Ping: Markaad daabacdo waxyaabahaaga, CMS waa inay si otomaatig ah ugu gudbiso bartaada Google iyo Bing iyadoon wax faragelin ah lagu sameyn. Tani waxay ka bilaabi doontaa guurguurta mashiinka raadinta oo waxay ka heli doontaa waxyaabahaaga cusub (ama wax laga beddelay) dib u habeyn lagu sameeyo mashiinka raadinta. Mashiinnada casriga ah ee CMS ayaa xitaa Ping ka saari doona matoorada raadinta marka jadwalka la dejinayo.
Redirects: Shirkaduhu badiyaa way isbedelaan oo dib u dhis ku sameeyaan goobahooda. Dhibaatada tan ayaa ah in mashiinka raadinta laga yaabo inuu wali ku tilmaamayo URL bog aan jirin. CMS-gaagu waa inuu kuu oggolaadaa inaad u gudbiso taraafikada bog cusub oo aad u weeciso mashiinka raadinta halkaas sidoo kale si ay u helaan una muujiyaan bogga cusub.
Goos gooska hodanka ah: Mashiinnada wax lagu raadiyo waxay bixiyaan qaabab microdata ah oo loogu talagalay caabinta iyo aqoonsiga rootiga jajabka ah ee ka dhex socda bartaada. Badanaa, calaamadeyntaani waxay u baahan tahay in lagu dabaqo mawduuca aad ku geyneyso CMS-gaaga ama waxaad ka heli kartaa qaybo kuu oggolaanaya inaad si fudud u hirgeliso. Goobo hodan ah sida Schema ee Google iyo OpenGraph ee loogu talagalay Facebook waxay xoojinayaan natiijooyinka mashiinka raadinta iyo wadaagista waxayna u kaxeyn doonaan booqdayaal badan inay gujiyaan.
Robots.txt: Haddii aad tagto xididka (cinwaanka saldhigga ah) ee boggaaga, ku dar robots.txt cinwaanka. Tusaale: http://yourdomain.com/robots.txt Ma jiraa faylal halkaas ku yaal? Faylka robots.txt waa feylal rukhsad aasaasi ah oo u sheegaya mashiinka raadinta bot / spider / crawler wixii tusaleyaasha ah ee la iska indha tirayo iyo waxa ku saabsan gurguurto Intaas waxaa sii dheer, waxaad ku dari kartaa xiriiriye khariiddada boggaaga dhexdeeda!
Quudinta RSS: Haddii aad leedahay hanti kale oo aad rabto inaad xayaysiiso bartaada, haysashada RSS-ka si aad si fudud ugu daabacdo jumladaha ama cinwaannada bogagga dibadda waa baahi.
Search: Awoodda aad ku dhex baari karto gudaha kuna soo bandhigi karto natiijooyinka ku habboon waxay daruuri u tahay dadka isticmaala inay helaan macluumaadka ay raadinayaan. Bogagga natiijooyinka mashiinka raadintu waxay badiyaa siin doonaan goob labaad oo loogu talagalay dadka isticmaala raadinta si ay uga dhex raadiyaan goob sidoo kale!
Ammaanka: Moodel nabadgelyo oo adag iyo martigelin ammaan ah ayaa ka ilaalin doonta boggaaga in lagu soo weeraro ama lagu dhigo koodh xaasidnimo ah. Haddii bartaada internetka ay ka hesho koodh xaasidnimo leh, Google ayaa kuu tilmaami doona oo kula socodsiin doona ka hor Webmaster-ka. Waa lagama maarmaan inaad haysato nooc ka mid ah kormeerka ama astaamaha amniga ee ku dhex jira CMS-gaaga ama xirmadaada martigelinta maalmahan.
Daabacaadda Bulshada: Awoodda si toos ah loogu daabici karo waxyaabahaaga cinwaannada la hagaajiyay iyo sawirrada ayaa la wadaagi doonaa waxyaabahaaga. Waxyaabaha la wadaago waxay keenaysaa in lagu sheego waxyaabahaaga. Sheegashooyinku waxay horseedaan xiriiro. Xidhiidhyaduna waxay keenaan darajo. Facebook wuxuu sidoo kale bilaabayaa Maqaallo Dhakhso ah, qaab loo daabaco maqaallada oo dhan si toos ah bogagga sumaddaada.
Is-diiwaangelinta: In kasta oo dadku aqrinayaan qoraallada akhristayaasha RSS ay inta badan dhinac uga dhaceen dariiqa halkii laga wadaagi lahaa bulshada, awoodda loo leeyahay isku-darka waxyaabaha aad ka kooban tahay bogagga iyo aaladaha ayaa weli muhiim ah.
Tagitaanka: Mashiinnada raadinta ayaa inta badan iska indhatira astaamaha meta ee ereyada muhiimka ah, laakiin calaamadeynta ayaa wali ku imaan kara waxtar leh - haddii aysan jirin wax kale oo maskaxda lagu hayo ereyada muhiimka ah ee aad ku beegsaneyso bog kasta. Tilmaamyadu badanaa waxay gacan ka geystaan ​​helitaanka iyo muujinta qoraallada ku habboon iyo natiijooyinka raadinta ee ku dhex yaal boggaaga.
Tafatiraha Template: Tifatiraha tifaftiraha adag ee ka fogaanaya adeegsiga miisaska HTML una oggolaanaya HTML nadiif ah iyo faylasha CSS ee ku lifaaqan si habboon u qaabeynta bogga. Waa inaad awood u yeelatid inaad heshid oo aad rakibatid arrimo adigoon u sameynin wax horumar ah oo muhiim ah boggaaga adoo ilaalinaya waxyaabahaaga iyada oo aan wax dhibaato ahi jirin.
Calaamadaha XML: Khariidad deg deg ah oo si firfircoon loo soo saaray ayaa ah qayb muhiim ah oo siisa matoorada raadinta a map meesha mawduucaagu ku yaalo, sida ay muhiimka u tahay, iyo goortii ugu dambeysay ee la beddelay. Haddii aad leedahay goob ballaadhan, khariidadahaaga mareegaha waa in la tuujiyaa. Haddii khariidadda bogga ay ka sarreyso 1Mb, CMS-gaagu waa inuu abuuraa khariidado badan oo mareeg ah ka dibna uu isku xirxiraa si mashiinka raadintu u wada akhriyo.
Waxaan ku baxayaa addin halkan ku yaal oo aan sheegayaa; haddii wakaaladdaadu ay kugu dalabayso cusbooneysiinta nuxurka oo aadan marin u helin nidaamka maareynta maaddooyinka si aad u hagaajiso bartaada… waa waqtigii aad ka tagi lahayd hay'addaas oo aad naftaada u heli lahayd mid cusub oo adag nidaamka maamulka content. Wakaaladuhu mararka qaarkood waxay naqshadeeyaan goobo adag oo taagan oo waxay kaa doonayaan inaad u beddesho waxyaabaha ka beddelaya sida aad ugu baahan tahay… aan la aqbali karin.
Tags: ampcms seomicrodatajajabka hodanka ahrobots.txtayna search engineSEOliistada hubintaKhariidadda boggawordpress seokhariidada bogga xml
Nov 13, 2010 saacadu markay tahay 12:37 PM
Waa maxay? Ma jiraan talooyin gaar ah? Sidee shirkaddu u ogaataa CMS-da ay u baahan yihiin ama sida ay xalka ugu adag u shaqeyn karto? Liis wanaagsan, Mudane Karr.
Jecla liiskan! Kani hadda waa hagitaankeyga maadaama aan bilaabay inaan ka dukaameysto CMS. Waxaan sameynayay dhamaan naqshadeynta webka naftayda, laakiin waxaan rabaa inaan yareeyo waqtiga aan kuqoro koodhka si aan u kordhiyo waqtiga aan ku bixiyo istiraatiijiyadda websaydhka. Ma haysaa wax talo bixin ah oo ku saabsan nidaamka guud ee DIY (WordPress, Joomla, iwm)?
Oktoobar 8, 2011 at 6:43 PM
URL-kaasi wuu shaqeeyaa, marti. Si kastaba ha noqotee, CMS-ga wanaagsan ayaa ping / gudbin doona khariidadda boggaaga mar walba oo aad daabacdo waxyaabaha ku jira!
Oktoobar 8, 2011 at 6:45 PM
Waxa kaliya ee aan hadda ku dari lahaa tan ayaa ah in barxadda wax lagu qoro ay tahay inay si sax ah u muujiso calaamadaha rel = ”qoraaga” oo ay u oggolaato isku xirnaanta 'Google Profile' si sawirrada qoraagu ugu soo baxaan natiijooyinka raadinta.
Oktoobar 8, 2011 at 10:38 PM
Gabi ahaanba ku raacsanahay - Shirkadna waa inaysan CMS lahayn.